यी रोमी नेइभबर्ग र सावन्नाह डकररको मामलामा संदिग्धहरूको नाम हो? मार्टिन भिजल्याण्ड
[अपडेट गर्नुहोस्: Lees यहाँ पहिलो सम्पूर्ण फाइल पछिल्लो घटनाक्रमका लागि] यो स्पष्ट छ कि रोमी र सावनाहको हत्या अझै अझै व्यस्त छ। यद्यपि रोमी को सम्भव गैर अस्तित्व को बारे मा एक केहि हद सम्म विचित्र सोच को साजिश देखि संसारलाई सहयोग गर्नुभयोफेसबुक टिप्पणीहरू टोल र वृद्ध व्यक्तिहरूको मुख्य रूपमा देखिन्छ। रोमी बाट कुनै गुस्सा गर्नुभएका प्रेमिकाहरू जसले यस विचारबाट गुमाएका थिए। तथापि, आमाले ईमेल मार्फत जवाफ दिनुभयो। यो सबै दिन र अंतिम संस्कार पछि; जुन आफैमा उल्लेखनीय छ। यदि तपाईंको छोरी दफन गरिएको छ भने, साजिश विचार संग कसैलाई लेख्नुहोस्। तपाईं त्यसो त चिन्ता गर्नुहुन्न; तपाईंसँग तपाईंको मनमा अरू केहि छ। सम्भावित तपाइँ पुलिसलाई बोलाउनुहुन्छ, तर तपाईं आफ्नो आईडी कार्डको प्रतिलिपि पठाउन वा रोमीको आईडी कार्डको प्रतिलिपि पठाउनुहुन्न। रोमी र सावनाह वास्तवमा अस्तित्वमा छन्। त्यो स्पष्ट भयो। तथापि स्पष्ट भएन, बाकी बाँकी कथा हो र म के गरिरहेको छु भनेर सोच्दैछु।
तपाईं आकृतिमा आँखा राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सामान्य अर्थ बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो कथा को केहि सही छैन। यद्यपि मीडियाले यो कथा बेच्नका लागि पीटर आर डी देस्सेज र जेन भ्यान डेभ हेभवेल जस्तै ठूला केटाहरूको साथमा बेच्न खोज्छ। "हामीले पुलिस र न्यायपालिकाको भ्रमण गरेका छौं र हामी चीजहरू एकअर्काबाट अलग छन् भनेर जान्दछौं।" तर त्यहाँ केही चीजहरू छन् जुन सही छैनन् र सबैले उनीहरूलाई आफ्नो झगडा लगाएका छन् भनी सोच्छन्। ती केहि फेसबुक ट्रालहरू, जुनसुकै तिनीहरूले गर्न सक्छन्, त्यहाँ कुनै पनि व्यक्तिलाई जो फरक छ वा आक्रमण गर्दछ, आक्रमणहरू र जलाशय बाहिर जान्छ। यो टिप्पणीकारहरूले पनि एक कठिन शब्द फिल्टरको माध्यमबाट जान्छ जुन फेसबुकमा भरपूर शब्दहरूको सूचीमा फिल्टर गर्दछ, तर यसले स्पष्ट रूपमा यी ट्रेलहरू गाँस्न सक्दैन। यदि फिल्टर 'मनोचिकित्सक' जस्तै दुर्व्यवहारमा सेट गरिएको छ भने, यस्तो ट्रयाल अझै पनि "तपाईं साँच्चै मनोचिकित्सकमा जानु पर्छ"वा त्यस प्रभावको पाठहरू। र यसैले यो देखिन्छ कि एक व्यावसायिक मार्केटिङ एजेन्सीले यी हत्याको आधिकारिक पढ्ने प्रश्नहरूको हिसाब गर्ने व्यक्तिहरूलाई आक्रमण गर्न सक्रिय छ। यो चिन्ता छ कि यो चिन्ता जेसिसको कार्यालय हो, तर म यो थप अनुसन्धान गर्नेछु।
केही उल्लेखनीय घटनाहरू रोमी र सावनाहका यी हत्याहरू हुन्। सुरु गर्नका लागि, सम्पूर्ण नेदरल्यान्ड्स माथि उल्लेखित थियो र सामाजिक सञ्जाल ध्यानमा लगभग असम्भव हत्या ल्याउन र मान्छे खोज्न जान्न प्रयोग भएको थियो। साक्षीहरूको खोजीमा सानानाको खोजीमा पानीको बोतलबार निकालिएको थियो। कसले पानी प्रायोजित गरेको छ। सावनाह आखिरकार को खोज को प्रतिभागिहरु द्वारा नहीं मिलयो, तर कुनै अन्य द्वारा; अज्ञात व्यक्ति। रोमी पनि अज्ञात व्यक्ति द्वारा फेला पर्यो। दुवै केटी डचमा फेला पर्यो, तर यो पूर्णतया अज्ञात छ कि त्यहाँ त्यहाँ पुग्यो। रोमीले बाटोमा रहेको डचमा औद्योगिक क्षेत्र डे क्रोनकेल्स मा डेलिभिजन र साविनाहलाई पथमा राखेको छ। तर के उल्लेखनीय छ कि नामक खोजीकर्ताहरू थाहा छैन र पनि धेरै धेरै पत्ता लगाउने बाटो र के देखिने कुराको बारेमा भनिएको छैन। यो सबै विनाशकले ढाकिएको छ: 'हामी धैर्य र आफन्तहरूको आदरको बारेमा केही कुरा उल्लेख गर्दैनौं।
के तपाईंलाई थाहा छ के मलाई लाग्छ? The साजिश कि म अन्तिम हप्ता शनिबारमा पठाइयो र जसको बारे म प्रकाशित आइतवार (र मा अर्को लेख फेरि नतिजा गर्न सक्दछ), राम्रो तरिकाले एक दुर्गम बाटो भएको हुन सक्छ। यो मलाई "साटानिक सञ्जालहरू जुन अनुकरणीय बाल हत्या गर्दै" खोज्न अनुमति दिन्छ। मैले यस विचारको बारेमा मेरो संदेह तुरुन्तै गरेन। र अब मलाई लाग्छ कि गलत ट्रयाकले मलाई अर्कोबाट हटाउनुपर्दछ, सम्भवतः धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न अर्थात् अर्थात्: "रोमी र सावनाह साँच्चै मरेका हुन्?"
"तपाई अहिले पूर्णतया पागल हुनुहुन्छ? त्यसैले तपाईं साँच्चै मरेका छन् भनेर सोच्नु हुन्छ! त्यहाँका मजाकहरू छन्? हामीले अझै पनि शोक गर्ने व्यक्तिहरू देखे? " हो, हामी रोमीको अंतिम संस्कारको समयमा सुन्दर स्प्रिन्डर देख्नुभयो, जहाँ छातीमा सेतो गाडीमा झरेको थियो। मैले तुरुन्तै आश्चर्य गर्थे किन रंग कालो प्रयोग गरिएको थियो। परिवारले पनि सेतो, अन्धकार लिमोसिनमा छोयो। प्रेस दूरस्थ रूपमा फिलिम गरिएको थियो र तस्विरमा आमाबाबुको शट कहिल्यै पनि थिएन। सावनाह को अंतिम संस्कार को लागि एकदम सही थियो। फेरि एक लक्जरी शत्रु, तर यो समय कुनै गाडी छैन। तथापि, अन्धाधुरी लिमोसिनहरू। यहाँ पनि हामीले चित्रमा आमाबाबुलाई देखेका छैनौ। म होहोभेनन मा उपस्थित थिए र एक प्रेमी फोटोग्राफर एक क्यामेरा संग अतीत सुरक्षा चलान को कोशिश गर्यो, तर त्यो धेरै आक्रामक रूप देखि संपर्क गरियो र यो स्पष्ट गरे कि कुनै फोटो या भिडियो नहीं गरिन सक्छ, अन्यथा उपाय पालन गर्नेछन्।
धेरै उल्लेखनीय चीजहरू उल्लेख गर्दै छन्, जस्तै बारबेक्यू फिल्म कि सावनाहका पिता गायब भएको समयमा राखिएको थियो र त्यस समयको कि बन्सोचोटन पहिले नै अशांतिमा थियो। आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलको स्क्रिन शटमा हेर्नुहोस्। तपाईंको छोरीले हराएको बेलामा म्यानहोल आवरण बारबेक्यू बारे भिडियो कसले गर्छ?
त्यसपछि हामीसँग तथ्य छ कि म रोमीको साइट हेर्दै छ। मित्रता फोटोग्राफर सावनाहको स्थानमा देखियो। त्यहाँ दुवै पक्षमा डचमा गतिविधिको कुनै ट्रेस छैन। तपाईं आशा गर्नुहुनेछ कि एनएफआई (फोन्सिसिक इन्स्टीट्यूट) को पुलिस अफिसर तथा कर्मचारीहरूले शरीरबाट पानीबाट बाहिर निकाल्छन्, तिनीहरू डुबाइरहेका रिसर्च गर्न विभिन्न प्रकारका पानीमा जान्छन् र यस प्रकार किनारलाई क्षति पार्छन्। केटीहरू पनि पानीबाट हटाइनु पर्छ। तपाईं कुनै चीज बिना किनाराको क्षति बिना नै गर्न सक्नुहुन्न, जबसम्म तपाइँ ट्यापमा फाल्नु हुन्न र जमीनमा छुनुहोस्। यस्तो गतिविधिको कुनै ट्रेस थिएन। साइटहरू जहाँ छन् त्यहाँ कुनै पनि थाहा छैन। एक दुई केटाहरु मध्ये मैले बोलाइयो 10 मिनेट पहिले रोमी फेला पर्यो, अझै पनि त्यो स्थान अतीत। उनले कुनै कुरा सुन्न सकेनन् वा नदेखेको कुरा पनि उल्लेखनीय थिएन। मैले बोलेका लागि अग्रगामी (जुन केटाहरू स्काउट गर्न आए, किनभने त्यहाँ त्यहाँ चक्रलाई अनुमति दिइनेछैन) पनि थाहा थिएन त्यहि स्थानमा जहाँ थियो।
मैले कल आफैलाई सोध्न थाले कि हामी पूर्णतया मूर्ख छैनौं। रोमी र सावनाहलाई मारेका छन्, के छन् अपराधीहरू? त्यसपछि मैले फेसबुकमा निम्न विचार पोस्ट गरें:
कृपया मलाई मेरो विचार बोल्नको लागि क्षमा गर्नुहोस्, तर कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ कि यस अवस्थामा रोमी र सभाना मूर्ख भइरहेको छ। के भयो भने त्यहाँ कुनै मृत केटीहरू थिएनन्? मजाकहरू गोपनीयतामा घोरिएका थिए र क्यामेराहरू लामो दूरीमा राखिएका थिए। सविना डेकेकरका पिता सावनाहको विफलताको दिन अर्को सुन्तला मासु-ग्रिल गरिएको फिल्म राखे।
अब धेरै तर्कहरू यस्तो साजिशलाई तिरस्कार गर्न तैयार गरिएको हुन सक्छ, तर वास्तवमा सबै ती तर्कहरू बदल्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि, मैले एक इमेल प्राप्त गरेको छु कि रोमीको हत्याले ब्रायन निजहोफको विरुद्धमा गरेको कार्य गर्दछ। तल रहेको भिडियोमा तपाईंले मैले प्राप्त गर्नुभएको ईमेल देख्नुहुन्छ। मैले थप जानकारी प्राप्त गर्न खोजेको छु, तर मनमा राखिएको छ कि यो एक जाल हो। कसले मलाई बताउँछ कि यो ईमेल ठेगाना अवस्थित छ वा यो कथा एक मनोचिकित्साको भाग होइन? यो ईमेलको सामग्री सहि सही छ। एक रिपोर्ट अनुसार कलको AD संदिग्ध एडे बाट आउनेछ। किनकि मैले थप प्रतिक्रिया प्राप्त गरेन भने, म यस ईश्वरलाई यो विचित्र 'समानांतर हत्या' को बारे मा अधिक स्पष्टीकरण प्रदान गर्न को लागी पुलिस र न्यायपालिका को मजबूर गर्न को आशा मा प्रकाशित गर्छन।
जब मैले ब्रायन निजहोफको फेसबुक प्रोफाइल हेर्छु, मैले देख्छु कि उनी अझै रोमी नेइभबर्गसँग मित्र हुन्। र अब यो स्पष्ट छ कि रोमीको आमाबाबुले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा पहुँच गरेको छ (जस्तै पिता द्वारा पोस्ट गरिएको प्रोफाइल तस्विर द्वारा प्रमाणित गरिएको छ)। यसबाहेक, ब्रायनसँग कुनै पनि हिसाबले कुनै साथी छैन। शायद उनीहरु 'अब मित्रता' छ, तर किन उनीहरु सबैलाई र निश्चित रूपमा रोमीको मित्रले 'अविवाहित' होइन किन कि अझै पनि उनीहरूको बीचमा खडा हुन्छ। आफैलाई खोज्नुहोस्।
म आफैलाई सोध्न सक्छु: "ब्रायन निजोफले अवस्थित छ? मानौं कि त्यो एउटा ढाँचात्मक वर्ण होइन; यो पनि मानिन्छ कि सनातन अपराधी एक परिचित चरित्र होइन, तब यो दिलचस्प छ कि यो मान्छे को जान्छ र के बारे मा जान्दछन् (यसको बारे मा मीडिया को बारे मा प्रकाशित)। रोमीको सतावटले स्वतन्त्रवादी हुनेछ किनभने तपाईं2घण्टामा एक्टिस्ट हत्या गर्नुहुन्छ र तपाइँलाई बाइकमा जानुहोस् जहाँ बाइक द्वारा जान सकिन्छ। उनको ट्रंक थिएन, त्यसैले बोल्न। यसको अतिरिक्त, यो स्वाइपले पनि2घण्टाको समयमा यौन दुर्व्यवहार गरेको छ। एक गाडी चालकको लागि धेरै राम्रो! Savannah अपराधी एक वर्ष को लागि यो थियो truant। त्यसैले क्यारेक्टरहरू दुवै प्रोफाइलहरू छन् जुन नियमित 14 को 16 वर्षमा अपेक्षाकृत अज्ञात बनाइन्छ। तर (र त्यहाँ आउछ) त्यहाँ धेरै सामाजिक सञ्जाल गतिविधि थियो! के यो देखिन्छ कि वर्णित साजिशबाट 'समाधान' यस 'समानांतर हत्या' सँग सम्बन्धित छ? या ब्रायन मात्र सही संदिग्ध छैन र प्रेषकले मलाई गलत ट्रयाक पठाएको छ?
फेसबुक मार्फत मैले पनि Savannah को अभियोगक को नाम र फोटो प्राप्त गरे। मिडियाले कलको दिन अघि रिपोर्ट गरेको छ कि आमाबाबुले एक गुनासो दावी गरे लडाकु र निन्दा गर्ने। Nos.nl रिपोर्ट [उद्धरण] यद्यपि फोटो छिट्टै पछि हटाइएको थियो, आमाबाबुले एक रिपोर्ट फाइल गर्न निर्णय गरे। "उनीहरूले संकेत दिन चाहन्छन्। तिनीहरूसँग पनि गोपनीयताको अधिकार छ, "उनीहरूको वकील भन्छन्। अभिभावकहरूले विश्वास गर्छन् कि यो आफ्नो छोरा न्याय र जनताको विचार गर्न न्यायाधीश सम्म छ। तर मैले प्रश्न सोधें: "यो मनोचिकित्सक स्पिनको छैन, र एक हत्यारा को अस्तित्व पुष्टि हुनु पर्छ, केटाको अस्तित्वलाई सशक्त बनाइन्छ? अथवा यदि केटा साँच्चै अवस्थित छ भने सम्भव नक्कली आमाबाबुलाई स्वीकार्नु हुँदैन? के हामी यहाँ केहि संकट अभिनेताहरु लाई आमाबाबु को भूमिका निभाने वाला नहीं व्यवहार गर्दै छन्? " तल फेसबुकमा प्राप्त भएको निजी सन्देशको स्क्रिन दृश्य हो। सविना डिकरको हत्यामा शंकास्पद, एंजेलो सोर्स जेरोटो भनिन्थ्यो। फोटो उनको Instagram प्रोफाइल मा अझै पनि देखिने छ।
किन बायाँ र दाँयामा पठाइएका सबै अपराधी सूचनाहरू? के मानिसहरू साँच्चै मलाई मद्दत गर्न वा मेरो पाठकहरू गर्न चाहन्छन् र मलाई विश्वास गर्नुपर्दछ कि अपराधीहरू वास्तविक अपराधीहरू हुन्। म पनि सोच राख्छ कि उनीहरु कसरि औद्योगिक सम्पदा मा कि खाडी मा सविनाह पाए? रेल बाट?
त्यसपछि केही उल्लेखनीय। रोमी नेइभबर्ग को लागि अर्को दुई ओबामा विज्ञापनहरु को बर्नवेल्ड अखबार मा मिलयो। तिनीहरू उल्लेखनीय विज्ञापनहरू भन्दा कम छन्। बायाँ विज्ञापनबाट प्रेमिकाहरू हुन् जुन केवल पहिलो नामको रूपमा उल्लेख गरिन्छ, तर 1 व्यक्तिलाई पहिलो र अन्तिम नामको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। र JH Donnerschool लेख्छन्; "हामी उसलाई फोन गर्छौं"। तर के वास्तवमा अझै पनि उल्लेखनीय छ? आमाबाबुको लागि किन शोक विज्ञापन छैन? हामीले फेसबुकमा कुनैपनि पाठलाई किन पाठ देख्दैनौं: "गहिरो घृणित हामी हाम्रो छोरीको हानिको बारेमा छौं", वा केहि प्रभाव पार्ने?
यस मामलाको बारेमा प्रहरी र न्यायपालिकालाई खुला बनाउन केवल 1 तरिका हो र यो यथासंभव प्रकाशित गर्न को लागी हो। यो सोशल मिडिया मा राम्रो पकड तिर काम गर्न धेरै अधिक छ। र यदि त्यहाँ यस्तो डरलाग्दो समानांतर हत्या भएको छ जसमा सोशल मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो, यसले त्यो स्वीकार गर्न सम्भव छ जस्तो लाग्छ। तर धीरे-धीरे नेदरल्यान्डले त्यो एहसास गर्न थालेका खेलहरू उच्च स्तरमा खेल्दै आएका छन्, जसमा आतंकवाद र अपराधले अधिक से अधिक पुलिस प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्दछ जुन मानिसजातिबाट अधिक र अधिक स्वतन्त्रता लिइरहेको छ। र जबसम्म सबैले सही र धैर्य वा सम्मानबाट किनिको पछि लाग्दैन तर जबरदस्त प्रश्नहरू छैनन्, तिनीहरू (मनोचिकित्सक आविष्कारक) हामीलाई सजिलै आफ्नो जालमा लैजान सक्छन्। र यदि यो जाल फिर्ता पकाउन निकै गाढा छ भने, यो धेरै ढिलो हुन्छ। यो लाग््छ कि हामी यहाँ एक मनोविज्ञान संग काम गर्दै छन्। यदि यो मामला होइन भने, मलाई आशा छ कि मेरो लेखहरू छन्, कुनै पनि अवस्थामा, तिनीहरूलाई अधिक खुलापन दिन प्रहरी, न्यायपालिका र मिडियामा दबाब राख्नुहोस्। यदि यो मुख्यधाराको साथमा यो गर्नु पर्छ भने, हामी पितर आर डी डे वेज र जॉन भ्यान ह्युवेल जस्ता आवरण कवरहरू भन्दा धेरै अगाडी बढ्नेछौं। यो समय हो कि हामी मानिसहरु अधिक महत्वपूर्ण हुन सक्छौं र फेसबुक ट्रेलद्वारा वा आक्रमण नगर्नु हुँदैन विघटन। चिन्ता, चिन्ता र अपमान गरेर र मेरो ठेगानामा गल्ती नरोक्नुहोस्। सबै किलेबन्दी र विद्रोह (बहुविध वेबसाइटहरूमा फैलिएको) को एक राज्य कर्मचारी र जेरोन हग्वेजीज र उनको टोलीको नाममा आरटीडी पुजारीले साबित गरेको छ। यो समय छ कि फेरि र ईमानदार पत्रकारिताको लागि कोठा हो। त्यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दण्डित छैन। कि एक पटक फेरि महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ र तपाइँलाई फेसबुकमा कठोर सामाजिक मनोवैज्ञानिक हमलाहरू संग मारिनेछैन। व्यापारको खुलापनको लागि समय!
स्रोत लिङ्क सूची: viralnieuws.nl ,nos.nl, ad.nl
साजिश सोच, साथीहरूको दबाब र बहुमतको प्रतिक्रिया र पछ्याउने प्रवृति
ट्याग: एन्जेलो सोर्स Giroto, अंतिम संस्कार, ब्रायन निजहोफ, Bunschoten, सतावट, ईड, विशेष, Hoevelaken, Lunteren, हत्या, समानांतर हत्या, Romy & Savannah, रोमी नेइबुर्ग, अंतिम संस्कार विज्ञापन, संदिग्ध, संदिग्ध
16 जून 2017 मा 14: 18
16 जून 2017 मा 14: 29
अंग्रेजीले यसलाई बुझेको छ, तर अब यसको लागि एक ठुलो मूल्य तिर्नुको साथै एक नैतिक आतंकवादी लहर को माध्यम ले उही सरकार द्वारा आकषिर्त गरेको छ जुन आफ्नो निवासी को रक्षा गर्नु पर्छ।
16 जून 2017 मा 14: 40
युरोपियन परियोजना सीक्यू दुःखी हुनु हुँदैन:
ग्रीसको लागि 8,5 बिल, आईएमएफ लगभग बोर्डमा
ग्रीक सरकारले 8,5 अरबलाई युरोपेली आपातकालीन निधिबाट छोटो अवधिमा अर्को महिनाको ऋण तिर्न अपेक्षा गर्न सक्दछ। उर्जा राहत क्षितिजमा पनि चमक छ, तर कुनै सम्झौता अझै सम्म पुगिएको छैन।
यदि युगोग्रुकले ग्रीक ऋण पर्वतको बारेमा सम्झौता गरेन भने, समस्याहरू फेरि उत्पन्न हुनेछन्। जुलाईमा, ग्रीकहरूलाई अन्य रकम, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) को ठूलो रकम तिर्नुपर्छ।
16 जून 2017 मा 14: 38
मार्टिन, मैले तुरुन्तै सोधे कि तपाईलाई पठाएको साजिश भ्रामक हुन सक्छ,
एक ला "मरेको पूल षडयंत्र 'मामला Anass (म सम्झना जस्तो देखिन्छ जाली प्रहरी रिपोर्ट सहित) र शायद पनि फेरि एउटै क्लब। (जो पनि आईडी कार्ड किनभने सरकार गाँस्न सक्नुहुन्छ)
सौभाग्य देखि, तपाईं आफैले पनि खातामा लिनुभयो। म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु कि प्रेषक थियो र के तपाईको लामो ब्लग अघि पछ्याएको छ वा पहिले नै समस्याहरूसँग पहिले नै मिलाएको छ। उहाँले कसरी साजिश काम गर्ने परिचित हो कि कुनै परिस्थितिमा देखिन्छ।
वैसे पनि, पछि तपाईं आफ्नो गधा मा गाय देख्नुहुन्छ।
तपाईंले अविश्वसनीय काम राम्रो गर्नुभयो। Chapeau!
मेरो धारणा छ कि तपाईंले धेरै मानिसहरूलाई जागृत गर्नुभयो।
अर्को चरण, यसलाई सम्भव बनाउनुहोस् कि युवा अपराधीहरू अवस्थित छैनन्।
16 जून 2017 मा 15: 01
कृतज्ञताको लागि धन्यबाद!
र जसले मलाई पठाउनुभयो जुन साँच्चै मेरो लागि नयाँ अनुहार थियो। यसकारण म अत्यन्त विचलित थिएँ।
16 जून 2017 मा 14: 54
Romy Nieuwburg र 'Savannah Dekker' मा 'हत्या' एकदम फरक फरक आयाम छ जसले बढी केन्द्रिकरण र सेंसरशिपको नेतृत्व गर्नुपर्दछ। यो चालाक हो कि कुन अवस्था (राज्य) आतंकको अधीनमा हुन सक्छ र अब हामी दयालु हुनुपर्छ। त्यसैले अझै पनि थप उपायहरू:
"फेसबुक बगले सम्भावित आतंकवादीहरूलाई पहिचान समीक्षकहरूको मूल्य दिए
2016 को अन्त मा फेसबुक मा एक बग को अर्थ थियो सोशल नेटवर्क को बारे मा लगभग 40 निर्धारितकर्ताओं को नाम संभावित आतंकवाद को बारे मा जानिन्छ।
कुल मिलाएर, त्रुटिले हजारौं भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई प्रभावित गर्यो, जसको बारेमा विशेष विभागमा चालीस काम गरेको थियो जुन फेसबुकमा सम्भावित आतंकवादी कथनहरू र समूहहरूको खोजी पत्ता लगाउन र निर्धारण गर्दछ।
फेसबुकले सोशल नेटवर्कमा आतंकवादी सामग्रीको दुरुपयोग गर्न बिहीवार नयाँ उपायहरूको घोषणा गर्यो।
कम्पनीले मानव मूल्याङ्कन र कृत्रिम बुद्धिको संयोजन गरेर यसलाई गर्न चाहन्छ, फोटोहरू, भिडियोहरू र ग्रंथहरूमा अधिक नियन्त्रणको साथ, जुन आतंकवादी समूह वा अन्य पहलहरूसँग जोड्न सकिन्छ। "
16 जून 2017 मा 14: 57
सामान्यतया, मिडिया अपराधमा मृत्युको कारण रिपोर्ट। पीडित बेग्लै छ, वा डूबिङ, वा गोलेटहरू द्वारा, वा एक्स-नम्बर चाकू समातेर आदि द्वारा मारिएको छ।
त्यसो भए त केहि पनि छैन।
शर्तको हिम्मत छ कि जब "अनुसन्धानको रुचिमा हामी यसको बारेमा कुनै बयान गर्दैनौं" भनेर सोधे।
तर केटीहरू पहिले नै दफन गरिएका छन्?
साधारणतया, एक खण्ड प्रदर्शन गरिएको एक किशोरीको पछि लागी शरीर जारी गर्नु अघि। त्यो हप्ता लिन्छ !!!
यो ढिलाइ गर्नु पर्छ कि धेरै ढीलो अन्त्य।
16 जून 2017 मा 15: 04
सहमत हुनुहोस्। मैले त्यो उल्लेखनीय बिन्दु उल्लेख गर्न बिर्सें।
मजाक धेरै चिकनी छन्।
यो सम्भवतः एक डीएनए कथासँग गरिन्छ र सबै ट्रेसहरू सरल रूपमा स्पष्ट छन्।
कथा एक घन्टाको लागि लम्किरहेको छ!
16 जून 2017 मा 15: 44
नागरिक सार्वभौम छैनन् भने, देश / समाज छैन सार्वभौम छ, सार्वभौम जसलाई भइरहेको कुनै एक बाहिर खाली र डच इलाका र तिनीहरूको अपराध संगति र संस्थानहरुमा स्थित अपहरित गर्न। धेरै नागरिकहरु को अनुपस्थिति को मात्रा मा बोल्छ, आफ्नो आवंटित भाग्य को लागि एक संकीर्ण इस्तीफा। उनीहरूले आपराधिक नियम र कानुनको लागी जुनसुकै नागरिकहरु उनीहरूको पेटमा लाग्दैनन्। सबैभन्दा अधिक मुद्दा (pietendebat) को लागि सम्पूर्ण देश अशांति छ र एक पूर्ण लोकप्रिय वृद्धि लगभग बनाउन मा छ। तर सरकारको सिद्ध घोटाला लागि रूपमा बहुमत आफ्नो अनुमोदन संकेत र यसलाई मा acquiesce देखिन्छ रूप मा, fraudsters आफूलाई कारण विभिन्न क्रिस खरानी लागि चलिरहेको नागरिकहरु, दिनु झूट र छल को संग्रह। र कुलीन प्रतिनिधित्व मा विश्वास (तपाईं समाधान चोर र हत्याराहरूलाई बीच ठगाहाहरू छन् चाहिएमा) र शर्मिंदगी लोकतन्त्र फेरि हाल चुनावमा उच्च .वाराणसी द्वारा सिद्ध छ यो 1986 देखि भएको त उच्च थियो।
16 जून 2017 मा 16: 20
जो गरौं तपाईं एक ठूलो मुख छ जहाँ केही संख्याले, तपाईं बस सँगै hammering, वा तपाईं धेरै टाढा जानु भने, उनीहरूले तपाईँलाई हराएका प्राप्त र थप देखिन्छ कहिल्यै सुनिश्चित। सरकार पहिले नै धेरै टाढा गएको छ र सरकार यति धेरै मान्छेलाई मारिरहेको छ। बरु तिनीहरूले फेरि तिनीहरू सुट र अपराधीहरूमाथि denhaag मा Clowning भोजन बस्न गर्न क्याफे-रेस्टुरेन्ट को दसौं हजार संग विशाल आँधी हुनेछ, फेरि बाहिर आउन बहकाएको पोल तिर हिंड्न। यी चित्रहरूमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ, तपाइँ वरपर घुम्नु पर्छ र सट्टामा 'बच्चा हत्यारा र साटानवादी' लाई प्रदर्शन गर्न कम से कम एक धुन दिनु पर्छ। जब म मेरो पैसाको लागि काम गर्दछु, म आफैलाई लुटिएको छु, कसैको द्वारा र यसैले रोयल्स र अपराधीहरू राज्यमा अनुमति दिँदैन।
16 जून 2017 मा 17: 12
यस मामला मा मुख्य संदिग्ध सरकार सरकार हो, यो लगभग सरसफाई छ यदि यो केवल कड़वा रवैया छैन यो कल। यो मामलाले सजिलै देखाउँछ कि सरकारले तुरुन्त वा अप्रत्यक्ष रूपमा तथ्याङ्कहरू र परिस्थितिहरू प्रदान गर्न असफल भए पनि MH-17 हेर्नुहोस्।
हामी कुनै कल छैन भने हामी खेलेका छौं र जनसंख्याले यसलाई मीठा केकको लागि निगल्यो। त्यसबाहेक, टिभी स्टारहरू, एथलीटहरूको रूपमा अदालतको जेभर्सहरूको सामान्य भेदभाव आदि।
यो धेरै सरल छ कि हामी मास चेतनामा आउन सक्दैनौं अर्को अगली पीढ़ी एक केन्द्रीकृत तानाशाहीमा बढ्न बिग्रेको छ।
16 जून 2017 मा 18: 28
@ZalmInBlik, तिनीहरूले यसलाई स्वीकार गर्छन्। जाहिरी तरिकाले प्राथमिकताहरू सबै भन्दा कमजोर र कमजोर आत्माहरूको रक्षा भन्दा अन्य ठाउँमा झूटो छ:
लापता बच्चाहरूको पत्ता लगाउन प्रहरीले छोड्छ
प्रहरी विभागमा प्रमुख समस्याहरू छन् जुन आकलन गर्नु पर्छ कि लापता बच्चा जोखिममा छ कि छैन। यो RTL Nieuws द्वारा अनुसन्धान द्वारा देखाइएको छ। नेशनल पुलिसको पुलिस बलले समस्याको पुष्टि गर्दछ।
लापता व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय कार्यालय तत्कालीन घटनाहरूमा महत्त्वपूर्ण छ जहाँ बच्चाहरू जीवनको जोखिममा छन् वा बच्चाको दुर्व्यवहारको जोखिम कहाँ छ। यो 2000 प्रति वर्ष बारेमा, औसतमा हरेक दिन 5। अफिसका विशेषज्ञहरूले क्षेत्रका पुलिस अधिकारीहरूलाई मदत गर्न सक्छन् र हेलीकाप्टरहरू तय गर्ने निर्णय गर्छन् र एम्बर अलर्ट पठाउँछन्।
यद्यपि प्रधानमन्त्री ओएस्टेलले पहिले नै 2011 मा अधिसूचनाको कर्तव्य लागू गरे र सुधारको प्रतिज्ञा गरे, टोली अझै राम्रो कार्य गर्दैन, RTL Nieuws को स्रोतहरू रिपोर्ट गर्छ र कागजातहरू देखा पर्छन् कि RTL निईकिले देखाएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष:
त्यहाँ कम्तीमा कम्तीमा काम गर्ने मानिसहरू छन्।
टीमलाई बिरामी संग विवाद गर्नु पर्छ।
जो मान्छे टोलीमा काम गर्ने सबै विशेषज्ञहरू पर्याप्त छैनन्।
हराएको रिपोर्टहरू रिपोर्ट गर्न प्रयोग गरिने प्रणाली ठीक काम गरिरहेको छैन।
पुलिस संघ एसीपीका अध्यक्ष ग्रिट वान डेम्पको अनुसार, टोलीले यो समस्यालाई नराम्रो बनाउन सक्दैन।
मलाई आश्चर्य छ कि म किन क्राउनमा करदाता पैसा तिर्न चाहन्छु भने त्यहि कुलीनले यसलाई निलो पार्छ।
16 जून 2017 मा 18: 41
प्रवर्तन र संरक्षणको लागि धेरै सानो रकम एउटै सरकारको निरीक्षण असफल हुन सम्भव छ: सांपले आफ्नै पूर
16 जून 2017 मा 18: 42
16 जून 2017 मा 19: 27
Riffian, Riffian। अझै ....
त्यो खेल हो जुन खेलिन्छ।
जस्तो लाग्छ: 'स्रोत RTT' को रिपोर्ट तपाई अब रमाईंदैन?
स्रोतहरू बुलिस र आरटीएल पनि छन्, त्यसैले यो के हो?
सबै एक लिपि मानिस हो। समस्या सिर्जना गर्नुहोस्, यसलाई बदल्नुहोस्, वा यसलाई आविष्कार गर्नुहोस्।
अनि त्यस प्रतिक्रियाले यसो भन्छ: "केही गर्न सकिन किनभने बालबालिका ब्लाहा ब्लाहा हुन्"
समाधान: एजेन्डा जो पनि छ, आमाबाबु जो छोराछोरी चिप गर्न चाहानुहुन्छ, वा जस्तै कि केहि।
16 जून 2017 मा 19: 02
यो 'तिनीहरू यसलाई स्वीकार' को एक कुरा होइन ... यो एक 'समाधान' मध्ये एक हो 'लेख, प्रतिक्रिया, समाधान' लेखमा वर्णन गरिएको।
16 जून 2017 मा 19: 55
मेरो प्रतिक्रिया 2e "प्रतीक्षा संयमता" म आफ्नो प्राथमिकता भएको klootjesvolk..we सुरक्षा भन्दा अन्यत्र झूठ कि पनि लागि थप तिर्नुपर्छ प्रतिबिम्बित गर्न खुल्लमखुल्ला र खुलस्त अब संकेत गर्न चाहनुभएको ..What हेर्नुहोस् र बीच यो लक गर्दछ, यो कुलीन, राजधानी कर टाढा।
16 जून 2017 मा 21: 57
"तिनीहरू" त्यहाँको सुरक्षाको लागि त्यहाँ छैनन्, तर ती चाँडै वा पछि उठ्नेहरू विरुद्ध विद्रोहको रक्षा गर्न र विद्रोही हुन सक्छ। सबै कानूनहरूले ती मानिसहरुलाई सकेसम्म जित्न सकेको छ, जित्न सकेसम्म सकेसम्म कदम चाल्न सक्दछ (त्यसो त यो खडा गर्दैन) सबै कुलीनतालाई कुटपिटको खतराको रूपमा लिनुहोस्। यसको लागि तिनीहरू सधैँ दायाँ alibis बनाउँदछ। समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान।
16 जून 2017 मा 19: 19
मलाई अफसोस छ कि केही समयको लागि मैले निष्कर्ष निकालेको छ कि हामी पहिले नै एक तानाशाहीमा रहन सक्छौं, धेरै मानिसहरू अझै पनि 'महसुस' भनेर भ्रममा बस्न मनपर्छ कि उनीहरूले लोकतान्त्रिक तरिकामा बाँच्न खोज्छन्। ती अँध्यारो बादलहरू सँगसँगै प्याक लगाउँदैनन्, जहाँ अण्डाहरू जस्ता ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला हुन्छन्। अधिकारीहरु र अधिकारिहरु आफ्नो गौतम / स्वामी को स्क्रिप्ट को लागी आफ्नो बाटो मा हो। तिनीहरू संसारको आबादी, बलात्कारका छोराछोरी र महिलाहरु लाई पतित पार्न र उनीहरु लाई ठुलो र फिसाउन आफ्नो बाटोमा छन्। उठ्नु आवश्यक छ, उठ्दै र बढ्दैछ र के हुन जाँदैछ। तथ्य यो छ कि बहुमत सरकारको पक्षमा रहनेछ र सबै कुरामा उनीहरूको पालन गर्नेछ, सरकारसँग कान र मुख, बलात्कार, हत्यारा र लूटरहरूको ठूलो सेना छ। राज्य आतंक भनेको के युरोपमा रोलिएको छ र त्यसपछि सवार र निर्दोष स्वर्गदूतहरूमा परिवर्तन गरियो।
उनीहरूले खेललाई खुल्ला रूपमा खेल्छन् र कडा चुनौती र विद्रोह गर्न केहि चुनौती र तिनीहरू विद्रोह गर्छन् र उनीहरू हुन् जसले आफ्ना लुकाफेरिक अर्डरको लागि आफ्नो परिवारसँग धनुषा गर्दैनन्।
17 जून 2017 मा 00: 07
केटीहरूमा 'हत्या' पछि दुई उल्लेखनीय उपन्यास।
अभियोजक - जसले शरीरलाई रिहाउन थाल्नुभयो (तल हेर्नुहोस्) - यति धेरै छिटो भयो।
यस्तो नाजुक अवस्थामाको अवस्थामा, पहिले नै अतिभारित ओएमले गल्तिहरु (अभिनय) द्वारा गरे हुने जोखिम लिनेछ। हेरचाह यहाँ माथि रहेको छ (उदाहरणार्थ मृत्युको कारण तेस्रो पक्षद्वारा डबल जाँच गर्दै, यदि हप्ता महिनामा धेरै हप्ता लाग्छ?)
तपाईं कहाँबाट उठ्नु हुन्छ?
उद्धरण: "सार्वजनिक अभियुक्तले यो आकलन गर्छ कि कुनै संदेह छ कि आपराधिक अपराध गरेको छ र यदि यो मामला हो या न्यायिक खण्ड को आदेश दिए जान पर्छ। त्यसपछि सार्वजनिक अभियुक्तले शरीरको दफन वा दमनको बारेमा निर्णय गर्दछ "
स्वतन्त्रता र मृत्युको सही कारणको दृष्टान्त संधै न्यायिक स्वतन्त्रताको माध्यमले नेदर मा नेदरल्याण्ड फोर्जिक इन्स्टीट्यूट (एनएफआई) द्वारा सम्पन्न गरिनेछ।
17 जून 2017 मा 02: 53
र Soares साभान्नाह सम्पर्क थियो जब त्यो केवल / savannah_dekker तस्विर यो askfm छ जो सामाजिक मिडिया देखि थाह? समान केटी एक सुत्ने केटा / किशोरी को एक महान प्रोफाइल फोटो छ (ओछ्यानमा?) र यसको सानो फोटो तिनीहरूले प्रत्येक विरुद्ध आफ्नो पीठ संग गर्दै छन् कसैले तिनीहरूलाई फोटो खिंचवाने भित्र zitten.er गोरा बाल छैन देखेको रूपमा सामाजिक मिडिया देखि एक विदेशी जस्तै देखिदैन zien.ziet छैन रातो geplakt.zeker Soares मा गुलाब ... अनि कहाँ यो छ सारा कहानी भन्दा केटा? उनको प्रेमी उनले यो यो कुनै शब्द intimates यो मध्यम मा सुत्ने केटा छ उल्लेख भन्दा देखि Appts थाह त्यो? रेल शौकीन द्वारा? अनौठो ... .या प्रहरी ... .Deletes यसलाई मन पराएका उनी डेटिङ गर्दै थिए, केवल सातानको नाममा र यो आउँदैछ। वा मैले केहि बुझिनँ?
17 जून 2017 मा 02: 55
Ps त्यसैले यो सोध्नु हुन्छ.fm बिन्दु संग
17 जून 2017 मा 06: 10
एरिक क्लोनगर, होभेनकेनमा सामुदायिक एजेन्ट (फेसबुक हेर्नुहोस्) भन्छन्;
प्रिय निवासीहरू, मैले एक निश्चित मार्टिनको बारे मा धेरै परेशान रिपोर्ट प्राप्त गरेको छु।
उहाँले लेखहरू कि libel / हानिकारक देखि भरा प्रकाशित गर्दछ।
सकेसम्म धेरै सन्देशहरू रोक्नुहोस् र यसमा जानुहोस् ... आदि।
खरिद गर्दै .... कसको लागि? एरिक कोल्हनहा को लागि?
क्या म एक परेशान संदेश मिलयो छ कि एरिक ले मई मा4मा एक लंबी यात्रा को आनंद लिया !!
कार्यहरू पर्याप्त छैन कि छैन! ????
17 जून 2017 मा 06: 38
'एक निश्चित मार्टिन'। त्यसैले उनी 'भिजल्याण्ड' उल्लेख गर्न हिम्मत गर्दैनन्। यदि नागरिकहरू लेखहरू पढ्न जाँदैछन् भने, तिनीहरू आश्चर्य गर्न जाँदैछन् कि एरिक र तिनको साथी नायक वास्तवमा चरम हिंसा प्रशिक्षण र 'hangjeugd' जीवन दुर्व्यवहार गर्न धूम्रपान पछि गर्दै हुनुहुन्छ।
(सुझाव एरिक लागि, चरम हिंसा व्यवसायी र पनि विशेष jointjpeukjes र खाली जिप बैग बारेमा झूट को प्रतिद्वन्द्वीको: बस तिनीहरूले Correze पनि चिसो आय युवा यहाँ के भन्ने blowers तल एक रद्दीटोकरीमा र ठूलो ऐशट्रे राख्नु र यसलाई यहाँ काम गर्छ राम्रो)
सजाय / भित्ताका लागि सफा-अप कार्य सुरक्षित गर्दछ वा सम्भावित जीवीवीवी (नगरपालिका अनिवार्य स्वयंसेवकहरू पकाउनुहोस्)
17 जून 2017 मा 07: 01
"ट्राफिक लाइट रातो हुन्छ, ट्राफिक लाइट हरियो छ,
Hoevelaken मा त्यहाँ सधै केहि गर्न को लागी "(हेमन फिङ्कर्स उद्धृत गर्दछ, तर त्यसपछि अर्को गाँउको बारेमा)
17 जून 2017 मा 07: 52
वास्तवमा, म अब उनको विरुद्ध एक शिकायत फाइल गर्नु पर्छ किनकी उसले भन्छ कि म विचलित र निन्दा गरेको छु, तर कानूनी रूपमा यो सबैभन्दा ठूलो भोज हो। मैले कुनै विरूपण र निन्दा गरेन। यदि त्यो मामला थियो भने, तिनीहरूले मलाई धेरै समय अगाडि राख्थ्यो। फोल्डर!
वास्तवमा, कानुनी आधार, libel र निन्दा बिना कुनै बारेमा सन्देश पोस्ट गर्दै र म अब रिपोर्ट गर्न सक्छु।
त्यो एरिक कोइराला को हो? उल्लेखनीय छ कि उहाँले भर्खर भर्खर होभेनके द्वारा नियोजित हुनुहुन्छ। म उहाँको सीवीको बारेमा उत्सुक छु। के उनी पोलेनबर्ग Vloggersrel होक्स मा एक पुलिस अभिनेता को रूप मा पनि दिखाई थिएन?
17 जून 2017 मा 08: 30
उत्तम व्यक्ति (33) हो र भन्छन् कि उनि ब्लगर अदालत को लागी काम गर्दै छन्। शिकार खुला देखि खोलिनेछ। पीटर आर डी स्किन्स सम्भवतः सम्पूर्ण कार्यक्रमको पनि भाग हुनेछ। तिनीहरूले सबभन्दा प्रभाव पारेका छन्, तम्बूबाट प्रलोभन गर्न र त्यसपछि यसको एक मामला बनाउनु।
17 जून 2017 मा 09: 20
मलाई थाहा छैन कि यो मलाई अदालतमा तान्न काम भइरहेको छ। उनले त्यो लेखे। म भन्नेछु: आओ! म अदालतमा यो ठूलो छलफल गर्न चाहन्छु। त्यसपछि घोषणा गरेको व्यक्तिहरूको बारेमा सबै विवरणहरू आउँथे। यसको अतिरिक्त, म त्यसो गर्न सक्दिन किन यी घोषणाहरू गम्भीर रूपमा व्यवहार गरिन्छ; मलाई सबै लिबेल र हानिकारक बारे मा मलाई घोषणा को बिरुद्ध कि मलाई अनलाइन मा फेंक दिइयो।
यो सामाजिक सञ्जाल सामुदायिक एजेन्ट मेरो ठेगानामा मुक्ति र अपमानजनक सुविधा प्रदान गर्दछ। यहाँ हेर्नुहोस्:
17 जून 2017 मा 12: 38
तिनीहरू मार्टिन पूरा गर्न प्रयास गर्छन्। अधिक र अधिक आवाजहरू तपाईं विरुद्ध लडाकु र दुर्व्यवहारको रिपोर्ट गर्न आउँदै हुनुहुन्छ किनभने त्यो सिद्धान्त र तपाईं उनीहरूको सोचमा धेरै टाढा जान्छ जस्तो तरिकामा आफ्नो आँखामा लेख राख्नुहुन्छ। तर एरिक (उनको बिरामी सन्देशहरू) थाहा छैन कि यी सबै रिपोर्टहरूको साथ यो कसरी जान्छ। उसले कुनै कुराको प्रतिज्ञा गर्न सक्दैन, यसमा उनको ध्यान छ। उनीहरूले खासै चाहानुहुन्छ कि तिनीहरू होभेनकेनमा कडा प्रश्नहरू सोध्नदेखि रोक्न आफ्नो ब्लग भ्रमण गर्दैनन्। म उत्सुक छु कि उसले मंगलवार पछि तपाइँको प्रतिक्रियालाई कसरी प्रतिक्रिया दिनेछ।
17 जून 2017 मा 16: 03
ती आवाजहरू सबै फेसबुक प्रोफाईलहरूबाट आउँछन्। माफ गर्नुहोस्, तर मलाई यस्तो गहिरो खैरो संदेह छ कि यी कामदार व्यक्ति हो .. कि मार्केटिङ एजेन्सी अझै पनि कल गर्न पर्छ।
21 जून 2017 मा 21: 08
Haha Erik Kluinhaar (त्यो नाम मात्र) 33 वर्ष उच्चतम श्रेणीको Freemason होइन? नहीं, बस एक पुलिस दरवाजा!
एकवडी / पुलिस अभिनेता या जो पनि हाहा ?? ????
17 जून 2017 मा 08: 34
आउनुहोस् कि तिनी कसरी प्रतिक्रिया गर्छ:
17 जून 2017 मा 10: 24
मैले होभलिङ्क पुलिसलाई सोधें कि म एरिक कुँवरलाई कुरा गर्न सक्दिन। उनको सेवा छैन, मैले सोधें कि मैले यस स्थानीय प्रहरी अधिकारीको विरुद्धमा शिकायत दर्ता गर्न सक्दिनँ, जसमा उसले सुरू गरेपछि जिल्ला पुलिस प्रशिक्षण छैन:
17 जून 2017 मा 10: 41
यसबाहेक, मैले पनि उजूरी दावी गरेको छु (मैले फाईल गरेको फारम भर्दै छु, त्यसैले सबूत उपलब्ध छ)।
यदि यो उजुरी पनि व्यवहार गरिनेछ भने म उत्सुक हुँ।
17 जून 2017 मा 08: 18
अह, तपाईले पत्ता लगाए राम्रो छ, उनि पढ्छन्।
त्यहाँ मानिसहरू सँगसँगै पढ्ने, मजाजेज गोप्यमाथि पारदर्शिता लागू गर्न महान साहस छ।
आफैलाई सोध्नुहोस् र अन्धकारमा हल्का चमक दिनुहोस् त्यसैले आफैलाई सोध्नुहोस् कि चीजहरू सही वा गलत छन्।
युवाको भविष्य छ। तपाईंले पृथ्वीमा युवाहरूलाई सेट गर्नुभयो, यसको साथ जानुहोस् जस्तो कि तपाईं उपचार गर्न चाहानुहुन्छ, सीधा हुनुहोस् र यो ब्लगरको रूपमा रिजबर्ट देखाउनुहोस्।
यदि तपाई अझै पनि यस नि: शुल्क देशमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने प्रश्नहरू निःशुल्क छन्
तपाईंलाई धेरै बल र सफलता चाहियो
17 जून 2017 मा 08: 37
संयोगवश, तिनीहरू त्यहि फेसबुक प्रोफाईलहरू (सम्भवतः ट्रलहरू) हुन् जसले यो मर्मत र एजुकेशन एरिक कुकिनरको विनाशको जवाफ दिन्छ। जस्तै मेरो टाईमलाइन स्प्यामर।
17 जून 2017 मा 08: 58
1 के साथ ब्लक गर्नुहोस्? त्यो डबल डबलको साथ हुनुपर्छ। एरिक एक वास्तविक एजेन्ट हो, मलाई आश्चर्य छ।
यसको लागि तपाईंले कम्तिमा आधारभूत शिक्षा पूरा गर्नु भएको छ, मैले सोधे।
त्यसोभए, मसँग स्कूलमा धेरै धेरै भ्रमणहरू गरेन, तर कम्तीमा मलाई थाहा छ कि तपाईंले कसरी 'ब्लक' लेख्नुभयो र मलाई थाहा छ (स्ट्रीट वार्ड) कुनै पनि मामला कुनै libel र निन्दा पनि के हो।
शायद एरिक एक वास्तविक समुदाय एजेन्ट होइन तर स्थायी कामको साथ संकट अभिनेता होइन।
यदि तपाई सामान्यतया हेर्नुहोस् कि तिनीहरू सबै शक्ति-उत्सर्जन वर्दीमा राख्नुहुन्छ भने, कहिलेकाहीँ हामी अचम्म लाग्यौं भने हामी नैतिकता र क्षयको नियममा पर्दैन।
17 जून 2017 मा 09: 03
उहाँले भर्खरै आफ्नो सामुदायिक प्रहरी प्रशिक्षण सुरु गर्नुभएको छ, त्यसैले उसले हिज्जे गल्तीहरूको दोषी ठहराउन सक्दैन।
17 जून 2017 मा 09: 51
त्यसैले एरिक पहिले नै एक स्थानीय पुलिसकर्मीको रूपमा नियुक्त गर्नु भएको थियो जसको कारणले यसको लागि प्रशिक्षित गरिएको छ? त्यो कसरी सम्भव छ?
17 जून 2017 मा 10: 13
मलाई थाहा छैन कि यो सन्देश अचानक आफ्नो एफबीमा 12 जुन (त्यसैले सम्पूर्ण कुरा पछि) मा राखिएको थियो, जब उनले पहिले नै 1 फेब्रुअरीमा यो ट्वीटर गरे।
17 जून 2017 मा 09: 28
मलाई रोमीको आमासँग इमेल सम्पर्क भएको छ। उनले मलाई प्रश्न उठाउन आग्रह गरे कि मुक्ति र भ्रामक दाबी गर्न को लागी खतरा हटाउन। निस्सन्देह त्यो सजिलै संग गर्न सक्छ। बरु, उनले मलाई प्रतिलिपि आईडी कार्ड पठाए। सामुदायिक एजेन्ट एरिक कुकरेरले यी बयानहरू बेवास्ता र अस्पष्ट छन्। त्यो लिबेल हो र त्यो एक आपराधिक अपराध हो। एक नोकरको अवस्थामा।
यसको अतिरिक्त, उहाँले मेरो व्यक्तिको विरुद्ध सबै प्रतिक्रियाहरूलाई अनुमति दिन मेरो व्यक्ति विरुद्ध लडाकु र अपमानजनक सुविधा प्रदान गर्दछ। यो एक सेवकको मात्र उल्लेखनीय व्यवहार हो!
17 जून 2017 मा 06: 35
रोमीको शंकाले 'युवा टीबीएस' प्राप्त गर्नेछ। के उहाँले आफ्नो उमेरको लागि बलियो र ठूलो थियो? के उनी प्रभुको रूपमा चिनिन्थे? स्वतन्त्रहरू क्रोधित आक्रमणहरू प्राप्त गर्न र आक्रामक रूपमा प्रतिक्रिया गर्न वा प्रतिक्रिया गर्न सक्षम छन्। के उहाँबाट परिचित थियो? के रोमीको सबैभन्दा राम्रो मित्र उनको द्वारा अस्वीकार गरियो? के उहाँ उनको साथ रहन चाहानुहुन्छ? के रोमीको सर्कल साथीहरूमा परिचित थियो? के रोमी तिनलाई कहिल्यै डरलाग्दो थियो? यदि उसले उसलाई मार्यो भने त्यो कसरी भयो? अन्ततः तिनीहरू किन जानकारीको साथ पीडितलाई दबाब दिन द्रुत निर्णय गरे पछि बाहिर आउनेछन्? कुनै पनि मामला र कुनै पनि परिस्थितिमा, कुनै कानूनी दृष्टिकोण देखि, एक मान्यता स्वीकार गर्न सकिँदैन कि संदिग्धले अपराध वा धेरै अपराधहरू गरेको छ। किन रोमीको मृत्युको कारण पछि पूर्ण अनुसन्धान गर्न निर्णय गरिएको छैन?
सुरूवातबाट यो हिसाबले छ कि समाचार कवरेजले धेरै भ्रम, अटकल र अनुमान लगाउने काम गर्यो। संदिग्धहरू पनि पूर्ण रूपमा गुमनाम बनेका छन्, उल्लेख गरिसकेका थिए। विचार गर्नुहोस् कि त्यो सबै रणनीति को एक अंश थियो। जानबूझेर झूटो पटरिहरु र सिद्धान्तहरु को शुरुवात को लागी शुरूआत गर्दछ जुन कसैले 'भक्त' को रूप मा लेबल गर्न को लागी र यसलाई अपमानजनक को रूप मा राखयो।
आपराधिक कानून विशेषज्ञ 'पिएटर वान ड्रे कुरियज' (महसुस गर्छ) कि उनी सताईक छ र उनको जैकेटमा एक कट्टर सुनको मुर्गा थियो।
अदृश्य सन्देश र मुर्गाको अर्थ। त्यस सन्देशको नकारात्मक पक्ष तिनीहरूले जान्थे र 'नकली समाचार' लाई समाप्त गर्न र रोमी र सावनाहको मृत्युबारे जानबूझेर सोधे। 'साजिश कमेन्ट' समूहलाई निलम्बन गर्न र यो सुनिश्चित गर्नका लागि केवल 'सही' समाचार वस्तुहरू र टिप्पणीहरू राख्न सकिन्छ, तिनीहरू धेरै टाढा जान्छन्। पीटर आर डी वेशले भर्खरै यो लक्ष्य समूह (विम डंकर) मा समान उद्देश्यको शब्दहरूको साथ टिप्पणी गरे; स्ट्रेटज्याकेटहरूमा अनावश्यक साजिश कमेन्टलाई छोड्न।
17 जून 2017 मा 19: 12
सननाहको विफलताको सम्बन्धमा 16 जुन,3जून को Savannah को कोर को खोज देखि दिन दिन पुलिस द्वारा सुनेको थियो मा XNUMX संदेह।
18 जून 2017 मा 00: 02
तर आफैलाई निम्न प्रश्न सोध्नुहोस्: "यदि (सम्मोहनशील) कुनै पीडितहरू छैनन् (त्यसो कि तिनीहरू अझै जीवित हुन सक्छन्), त्यहाँ कुनै अपराधीहरू छन्?"
18 जून 2017 मा 06: 15
सम्मोहनशील, सिद्धान्तमा, धेरै धेरै। के 'जैविक' आमाबाबु अब सम्म सकिनै भुक्तानीको विरुद्धमा आफ्ना छोराछोरीलाई छुटकारा पाउन जान्छ? अथवा तिनीहरू अभिनेता हुनु पर्छ? तर हो, पड़ोसका बासिन्दाहरूलाई सजिलै बेवास्ता गर्न सक्दछ। मलाई गहिरो खैरो संदेह छ कि सरकारले एक झटका संग धेरै मक्खनहरु को लागी मौका पाएको थियो। तिनीहरू मौका लिन्छन्।
18 जून 2017 मा 07: 52
यदि ती 'आमाबाबु' डाटामा हटाइयो भने, त्यो धेरै संदिग्ध हुनेछ। त्यसोभए यो धेरै सम्भव हुनेछ कि सरकार खराब शैतान हो।
18 जून 2017 मा 05: 49
omegle लेख एक विवादास्पद भिडियो डेटिंग साइट अनुसार हो किनभने मान्छे अज्ञात र हस्तमैथुन हस्तमैथुन हुन सक्छ, कम से कम केहि लेख जस्तै कि लेख मा छ।
कुनै पनि अवस्थामा, तपाईं निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सावना यौनको लागि बाहिर हुनुहुन्थ्यो, तर मलाई विश्वास छैन कि यो लेख भनेको हो। सम्भवतः यो भनेको हो कि गडबड संदेह मात्र यौनको लागि बाहिर थियो।
सम्भवतः लेखले वयस्कृत हस्तमैथुन गर्ने ठूलो खतरा संग संयोजनमा इन्टरनेटमा गुमनामताको ठूलो खतरा उल्लेख गर्दछ। त्यसैले समस्या समाधान हुन सक्छ।
त्यसैले विचित्र सावनाह कथा सबै हिंसासँग लागू हुने लुकेको एजेन्डामा पूर्णतया फिट हुन्छ।
18 जून 2017 मा 11: 26
त्यो उमेरका बच्चाहरु इन्स्टाग्राम र स्नैपचाटमा छन्। बाँकी सबै psyopp काम हो। यो सबै अनुहार छ।
17 जून 2017 मा 20: 50
विच्छेद गरिएको परिवारबाट कसैले। गेमिंग मन परायो। आफ्नो जीभको पछाडि कहिल्यै नदेखाउनुहोस्।
18 जून 2017 मा 05: 19
@Alert, मलाई पढ्नको लागी कुनै ठाउँ छैन कि उहाँले कहिलेकाहीँ आफ्नो जीभको पछाडि देखाउनुहुन्न।
त्यो मलाई प्रतीत भई द्रुत पुलिस साक्षात्कारको कारण एक रोचक तथ्य लाग्दो थियो।
तपाईं कसरी निष्कर्षमा पुग्नुभयो कि उहाँले 'कहिलेकाहीं कहिल्यै आफ्नो जीभको पछाडि देखाउनुभएन'?
18 जून 2017 मा 06: 03
@PORVH, म माथि लेख मा लाइनहरु को बीच मा देख्छु। उनको 'साथी' वास्तव मा नहीं जान्दछन् कि उसले के गरिरहेको छ, न त तिनलाई भेट्न साथीहरू। उहाँ आफ्नो आमासँग बस्नुभयो। सोच्नुहोस् त्यो सुन्दर 'बन्द' थियो, उहाँले धेरै जाने गरौं।
'उनीहरूले ती सबै यात्राहरूको लागि कसरी पैसा पाउनुभयो (साथीहरूलाई थाहा छैन)। उनले भन्यो कि उनको अंशकालिक नौकरी थियो, उदाहरण को लागि एक स्टोर मा। '
'उहाँले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र फ्लिकरमा आफ्नो गतिविधिको लागि धेरै खाता बनाउनुहुन्छ। सहपाठीहरू (शंकास्पद) कि उनी अलग साथीहरूको समूह राख्छन्। '
"उहाँ मित्र मित्रहरू आफ्नो घरमा आउन चाहनुहुन्न। वास्तवमा, त्यहाँ उनीहरूको बारेमा थाहा छैन धेरै धेरै छन्। "
म आफैलाई यो विचार छ कि उहाँ 'अपराधी' होइन। मलाई संदेह छ कि सावनाहले भर्खरै धेरै सम्पर्कहरू बनाए राखेको छ।
18 जून 2017 मा 05: 06
प्रतिक्रियाहरूमा, कसैलाई सोध्नुहुन्छ किन वकीलको नाम उल्लेख गरिएको छैन।
18 जून 2017 मा 06: 31
त्यो केटा एक पिता छैन जो त्यहाँ त्यहाँ छ र सायद एक टाढा आमा पनि। भावनात्मक रूपमा उपेक्षा गरियो र 2015 मा केहि महिना को लागि स्कूल मा अनुपस्थित थियो। तिनीहरू 'रिचर्ड कुकुलिन्की' मा परिवर्तन गर्न अवयव हुन्। सायद यो सही छ कि तिनीहरू त्यो केटाको बारेमा धेरै चिन्तित छन्।
18 जून 2017 मा 06: 42
मार्टिन व्रिजल्याण्डको फेसबुकमा, इलोना वान ड्रे वल्लल्क भन्छन्- "भ्रमको बारेमा ज्ञात टिप्पणीहरू पछि-" मलाई रोमीको हत्यारा दिनुहोस्, तर म उहाँलाई भेट्नेछु। त्यो कठिन हुनेछैन "
मेरो जवाफ: प्रिय इलोना, किनकि यो शंकास्पद नाम को ट्रेस गर्न धेरै गाह्रो छ, यो मलाई लाग््छ कि उनको संग सम्झौता गर्न मिशन असंभव छ। शुभकामना
तपाईं पनि 'हत्यारे' बोल्नु हुन्छ तापनि निस्सन्देह उहाँ मात्र संदिग्ध हुनुहुन्छ।
र यदि तपाई अझै अझै नामक शंकाको नाम जान्नुहुन्छ भने दुई पटक सोच्नुहोस्।
बेवकूफ चीजहरु Ilona मत करो, कृपया निर्दोष संदिग्ध को रूप मा प्रेरित नहीं मारो।
18 जून 2017 मा 12: 23
पुरा तरिकाले पछार्नु पर्छ ... पहिले प्रश्नलाई जवाफ दिनु पर्छ कि हत्या गरेको छ कि छैन।
मेरो फेसबुक टाइमलाइनको वरिपरि धेरै ट्रलहरू छन्, त्यसैले यो यहाँ उल्लेख गर्न कुनै प्रयोग छैन।
18 जून 2017 मा 12: 38
पक्का, यो सत्य हो। यो इलोन पनि हत्या प्रवृत्तिका साथ एक साँच्चै भ्रमित व्यक्तिको सट्टा एक ट्रल पनि हुन सक्छ। मेरो प्रतिक्रिया को लागी त्यो प्रतिक्रिया को लागी।
18 जून 2017 मा 07: 23
यसबाहेक, त्यो 16 संदेह पनि पैसा लिनको लागी एक केटाको वेश्या हुन सक्छ।
18 जून 2017 मा 11: 28
16 संदिग्ध पनि युवा जेलको सदस्य हुन सक्छ, स्वतन्त्रताको विनिमयमा र Ver-Weg-gie-stan मा नयाँ पहिचान, एक psyopp मा भर पर्छ।
हामी धेरै व्याख्या गर्न सक्छौं, तर यदि हामी केवल तथ्याङ्क संग रहन सक्छौं भने हामीसँग मीडिया मा एक कथा भन्दा बढी जानकारी छैन। कुनै पनि लागि कुनै प्रमाण छैन। तिनीहरू कथाहरू हुन् जुन एक राम्रो मनोभाव (/ धेरै राम्रो) हुन सक्छ जसको कारण एक मनोचिकित्सा स्पूपको परिणाम हो।
18 जून 2017 मा 17: 59
यो एक पोर्तुगाली / ब्राजीली नाम 'सोइसेज गारोटो' हो। वान मार्लांत (कलेज) को निदेशक टिनी डे ग्रोट को अनुसार, अगस्ट 2016 देखि केटाकेटीलाई केटाकेटीमा देखा पर्दैन। उनीहरूको 'यूट्यूब च्यानल' लाई उनीहरूलाई अन्तिम 10 महिनामा रेलबाट टाढा गएको छ।
प्रहरी र न्यायको लागि एक खाली पाना थियो र युवा हेरचाहमा थाहा थिएन। प्रहरीले प्रारम्भिक सावनाह र एन्जेलो एक-अर्कालाई कसरी थाहा पाएको थिएन भन्ने कुरा थिएन। त्यसपछि अचानक त्यहाँ 'अस्पष्ट' वेबक्यामहाट साइट हो जहाँ उनीसँग सम्पर्क थियो (र एक अर्कालाई थाहा पाउन?)
(666) व्यान मार्लान्टमा, उनीहरूको सहपाठी उहाँका साँच्चै सजग थिएनन्, उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छैन, उनीहरु के हो भने, उहाँका साथीहरू वास्तवमा उसलाई संभाल्न सक्दैनन्।
गिरफ्तार गर्न केही दिनअघि फेसबुकलाई संदिग्ध? त्यस दिन प्रहरीले उनीहरूलाई भेट्टाए, के शंकास्पदले आफ्ना साथीहरूलाई फेसबुकमा उनलाई विदेशमा लिन सोध्थ्यो?
18 जून 2017 मा 18: 26
हाहा, के एक अविश्वसनीय बेवकूफ डिक भन्छन्। hihi facebook ???? ???? ????
वास्तवमा यो अविश्वसनीय छ। त्यसैले .... उह फेसबुक। म भाग्न जाँदैछु र म मेरो नक्कली साथीहरूलाई सोध्छु कि मलाई विदेशमा लैजान्छ ...
यदि यो कथा सत्य हो भने यो सम्भवतः मात्र एक शुभकामनार्थी हो ..
बस केहि भन्न को लागी कि जब उनि De Lachende जेनेअal को भतीजी संग गरे छ।
संयोगमा, मैले GGZ वा समानमा निम्न उपचारबाट केही कुरा सुनेको छु, तर बेशक यो फरक तरिकामा हुन सक्छ।
18 जून 2017 मा 19: 20
केवल स्पष्टीकरण को लागि, De Lachende जेनोएल संग मेरो मतलब अलबर्ट Kesselring।
18 जून 2017 मा 18: 39
एक 'फेसबुक मित्र' ले टिप्पणी गरेको छ कि संदिग्धले मङ्गलबार, 30, मई मा आफ्नो एफबी प्रोफाइल परिवर्तन गरेको छ, र 'यसको कारणले गर्दा यो यसका कारणले गर्दा यसको नाम परिवर्तन भएको छ'। ती दिनहरूमा उनको एफबी पृष्ठको 'भागहरू' पनि हटाइयो।
यो संदिग्ध रूप देखि सबै एक साथ हाँ हाँ जोडिएको छ। कसले च्याटमा भेट्टायो? त्यहाँ एक वर्ष (विश्वासयोग्य) व्यक्तिको साथ त्यहाँ 'बेग्लै सम्बन्ध' भएको थियो? केहिले मलाई बताउँछ कि स्कूलले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तिनीहरूले उहाँलाई पछ्याईरहेका छन् र उनको साथ सम्पर्क गरे।
18 जून 2017 मा 11: 30
कुन को लागी एक मात्र विकल्प बनी रहन्छ
मार्टिन व्रिजल्याण्ड जस्तो कठिन लेखक? तीव्र दाँयामा जोडा। आज, ईडी को रिपोर्ट गर्छ कि एक कचरा बोंस्चेटर समुद्र तट मा गर्न सक्छन् 'हिर जंग जंगवां' को साथ एक swastika संग प्लास्टर। माफ गर्नुहोस् सज्जनहरू, तर म यस प्रकारको चरम दायाँ (सम्भव) psyopp प्रयास गर्न अग्रिम लिङ्क गर्न दिँदैन।
बन्सोचोटनको बर्गार्डले सन्देशको साथ बाहिर ल्याएको थियो कि सावनाहका साथी र परिवारको अनुसार "संदिग्ध" संग संवेदना "छिपा" प्रहरीको अनुसार, सावनाह घरमा राखिएको सामानमा आधारित थियो ??
19 जून 2017 मा 07: 35
Panky Plat ले एम.एम. बाट फेसबुकमा यसो भन्छ कि एम.एम. जस्तै सबै भन्दा लुम्बिनी आदि हिड्ने आदि।
यदि तपाइँ आफ्नो एफबी पृष्ठलाई केहि समयको लागि हेर्नुहुन्छ भने, फेब्रुअरीमा फ्रान्सफेसअभिजनका प्रोफेसर र जर्ज कार्लिन अझै पनि उत्कृष्ट छन्, जर्ज कार्लिनको चित्रको साथ र उनको अविश्वसनीय सरकारको बारेमा उद्धृत गर्दछ।
नमस्ते, त्यो कम्तिमा एकदम विरोधाभास छ कल गर्न !!
ठूलो नैतिक शूरवीरको नजिकको नजिक हेर्न को लागी एकदम दिलचस्प छ।
र त्यसपछि त्यहाँका पात्रहरू पनि सोचिरहेका सँगी मानिस पागल हुन्छन् तर उनीहरूको फेसबुकमा फ्रिकन्डल प्यानलहरूको तस्बिर (र यो व्याख्या बिना किन)। मैले सोधे कि यो सबै trolling छैन, तर केवल मूर्ख मानिसहरू जसले तिनीहरू भ्रममा छन् कि तिनीहरू ब्रह्मांडको केन्द्र हुन्। सायद यी लाशले सनस्क्रिन कारक 40 यो आउँदै गरेको हप्ताको साथ धेरै धेरै रमाईलो हुँदैछ किनभने यो मिडियामा सिफारिस गरिएको छ। गरिब थन्डरहरू।
20 जून 2017 मा 07: 49
समाचार कवरेजबाट मैले ईमानदारीपूर्वक यो समाचार तथ्यलाई संदेह गर्छु, केहि सहकर्मीहरूको साथ जो सरकार / मिडियाको बारेमा सोच्न सक्छ। त्यसोभए 'छिटो'; यति छिटो2अपराधीहरू, धेरै जोड दिन्छ कि चीजहरूसँग एकअर्कासँग केही गर्न हुँदैन; छिटो दफन गरियो। हाम्रो साथ सबै घंटीहरू, सौभाग्य देखि तपाईंसँग मार्टिन पनि। मृत्युको कारण सामान्यतया लामो लाग्दछ र सम्भावित अपराधीहरूको बारेमा कुनै निर्णय गरिएको छैन जबसम्म अनुसन्धान चलिरहेको छ। अब हामीलाई उमेर / लिङ्गको रूपमा भनिएको थियो। त्यसोभए यो मामला साँच्चै झगडा छ।
यदि पीडित साँच्चै डचबाट बाहिर जान्छ भने तपाईंले त्यो हेर्न चाहानुहुन्छ; फ्लैट चरणित घास, पानी को पानी मा गए, जसको वरिपरि ताजा सिगरेट चट्टानहरु मा पानी को पौधों आदि। फेरि फेरि राम्रो खोज र फिलिमिंग जाओ। यो किनभने तपाईंसँग बलियो बिन्दु छ।
20 जून 2017 मा 17: 02
अर्को व्यक्ति हराइरहेको छ ... यो समय 15 बाट एक व्यक्ति। सामाजिक सञ्जाल फेरि प्रयोग भइरहेको छ।
दिलचस्प छ, यो स्पष्ट रूप देखि भनिएको छ कि प्रहरीले फोन को सबै आवाज, जस्तै तैनाती को लागी। रोमी र सावनाहमा यो भएन?
20 जून 2017 मा 18: 16
ओमग JONGBLOETS लापता केटा हो? यो नोटिसको लागि राम्रो छ उनको सिद्धान्त ... ???? ????
« रोमी र सविना को मामला मा रोमी नेइवबर्ग को शिकायत गरे: अझै पनि धेरै प्रश्नहरु!
ब्रिटिश डीजे इस्ला भन्छिन् "लन्डनको ग्रेनफेल टावरमा सबैजना मरेका छन्" »
कुल भ्रमण: 16.182.439
नेदरल्याण्डका लागि अनिवार्य खोप योजना डिसेम्बर २०१ presented प्रस्तुत गरियो
Siep op घटना २०१ cor कोरोना भाइरस व्यायाम वुहान प्रकोप हुनुभन्दा weeks हप्ता अघि, समान अवस्थाको नक्कल गर्दछ
SalmonInClick op घटना २०१ cor कोरोना भाइरस व्यायाम वुहान प्रकोप हुनुभन्दा weeks हप्ता अघि, समान अवस्थाको नक्कल गर्दछ